कहिले तोकिएला प्रदेशको राजधानी?
You are at Home कहिले तोकिएला प्रदेशको राजधानी?
काठमाडौं, ५ वैशाख- संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार सुस्त देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो सर्त प्रदेशको राजधानी तय गर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफलसमेत हुन सकेको छैन । आगामी ७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको समेत गरी तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, संविधान जारी भएको सात महिना पूरा हुँदा पनि प्रदेश सिमाना विवाद टुंगो लागेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।